Balinde iSundowns yenze isimemezelo
UTSHEPO Motsoeneng ukholwa wukuthi uRichard Ofori noRicardo Goss bangawenza umehluko kwiBucs Izithombe: BACKPAGEPIX
Mthokozisi Mncuseni | June 25, 2020
ABADLALI ababili beBidvest Wits okungangatshazwa ukuthi banekusasa kwiBafana Bafana, uRicardo Goss noHaashim Domingo, bakuqinisekise benganakile ukuthi ngokwabo osekusele ukuthi iMamelodi Sundowns ibamemezele njengabadlali bayo, abasha.
Liyavela negama likaGift Motupa kubadlali ababheke kwiSundowns, njengoba kuzothi ekupheleni kwesizini iWits ithathwe yiTshakhuma Tsha Madzivhandila kodwa bekungakaqinisekiswa lutho ngaye (uMotupa).
Lokhu kuvele ezinkulumeni ezahlukene ezenziwe yilaba badlali muva nje. UGoss, ongunozinti ophambili ngokombango wejezi, uthe akazi lutho kodwa imenenja yakhe eyazi konke.
UDomingo ofike kwiWits ephuma phesheya kwezilwandle wazifaka esikimini esikhulu, uthe ngabe wenza iphutha uma engamemezela into efana naleyo kodwa ukholwa ukuthi iSundowns iyokwenza lokho mhla inesizathu sokukwenza.
“Sisaxoxa neSundowns. Akukho okudlula lokho. Imenenja yami ebheke zonke izinto ezifana nalezo kodwa akulona iqiniso ukuthi sengiwumdali weSundowns.
“Ngokwami alikho elinye iqembu esike sakhuluma nalo. Ngeke ngakhe izindaba ezingekho. Alikho elinye iqembu engike ngatshelwa ngalo ukuthi likhombisa ukuba nentshisekelo ngaphandle kweSundowns,” kuchaza uGoss.
Okukhalisa uDomingo ukushabalala kwamaphupho abadlali abasezinhlakeni ezincane zeWits abangeke babe nomsebenzi uma iqembu lifudukela eLimpopo, ngesizini ezayo.
“Uma iSundowns ingakasho lutho nami ngeke ngisho lutho. Akukho okunye engingakusho. ISundowns iyona okufanele iqinisekise izinto, hhayi mina.
“Kusemhlabeni lapha izinto ziyashintsha, kungcono zishintshe kungabanga yimina oqinisekisa izinto ezingaqinisekisiwe. Izinto ziyashintsha ebholeni,” kusho uDomingo.
“Kukona konke okwenzekile kuze kufike ekudayisweni kweqembu, abazoshayeka kakhulu yilaba abebesenamaphupho okufinyelela esigabeni esikhulu.”